बुर्तिबाङ लगायत आसपासका स्थानमा हावाहुरीका कारण जनजीवन प्रभावित ! – ebaglung.com
२०७४ फाल्गुन २१, सोमबार १८:२०	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
टिकाराम भट्टराई, बुर्तिबाङ २०७४ फागुन २१ । ढोरपाटन नगरपालिका वडा न १ बुर्तिबाङ बजार लगायत आसपासका स्थानमा आज लागेको हावाहुरीका कारण जनजीवन कष्टकर बन्यो । दिउसो करिब ३ः३० बजेबाट ४ बजेसम्म लागेको हावा हुरीका कारण सर्वसाधारण, विद्यार्थी, पैदल यात्री व्यापारी प्रभावित बने ।
केहि समय देखी पानी (वर्षा) नपरेकाले धुलाम्मे बनेका बुर्तिबाङ आसपासका सड्कबाट उडेको धुलोका कारण होटल,पसलहरु धुलाम्मे बनेका छन भने हावासँगै आएको धुलोकाकारण व्यापारीलाई आफ्नो पसल तथा होटल बन्द गर्न तथा अभिभावकलाई आफ्ना बालबच्चा जोगाउन हम्मे हम्मे परेको थियो ।
स्थानियले आफ्नो घरमा लगाएको टिन,घरका छतमा सुकाएका कपडा एवंम भाडाँकुडा समेत उडाएको बताए । ईलाका प्रहरी कार्यलय बुर्तिबाङका प्रहरी निरीक्षक कृष्ण रानाले कार्यालयमा कुनै मानवीय क्षेति तथा घटनाको बारेमा जानकारी नआएको बताए । हावाहुरी रोकिएपछि अहिले भने अबस्था सामान्य बन्दै गएको छ ।
आज दिउसोको हावा हुरीबाट जिल्लामा कहिँ कतै केहि क्षती पुरायो कि ? भनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा सम्पर्क राख्दा प्रहरी नायव उपरीक्षक विश्वराज सिंह थापाले त्यस्तो कुनै समाचार प्राप्त नभएको जानकारी दिए ।
एआईजी शाहीव्दारा सशस्त्र प्रहरी बल गुल्मीको भवन उद्घाटन : ‘देश र जनता रहे हामी रहन्छौं !’